We Fight We Win. -- " More than Media ": ၀ဏ မောင်လွင် နှင့် အတူ မိုးကျော်သောင်းပါဝင်
၀ဏ မောင်လွင် နှင့် အတူ မိုးကျော်သောင်းပါဝင်
နိင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏမောင်လွင်ရဲ့ အမေရိကန် ခရီးစဉ်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦး
ဖြစ်တဲ့ ဦးမိုးကျော်သောင်းနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တချို့လည်း ပါဝင်လာကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်။
မိုးကျော်သောင်းက စစ်အစိုးရ နှင့် ပေါင်း ပြီး အဆမတန် ကြွယ်ဝချမ်းသာလာသူတဦး
အမေရိကန် အစိုးရက မြန်မာ စစ်အုပ်စုအပေါ် ဒဏ်ခတ်မှု တွေထဲမှာ ၂၀၀၇ ခုနစ် ဒဏ်ခတ်မှု
ကအတော်လေးကိုထိခုိုက်စေခဲ့တယ်။ အထူးသဖြင့် ဘဏ်စနစ်သုံးငွေလွဲ မှုများ မပြုလုပ်နိင်
ကြပါ။ အစိုးရ၀န်ကြီးများခရီးသွားလျှင် ခရက်တစ်ကဒ် မသုံးစွဲနိင်သည့်အထိဖြစ်ခဲ့တယ်
လုို့ သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၀န်ကြီးများခရီးသွားလျှင် စီးပွားရေးသမားတချို့ ကိုခေါ်သွားလေ့ရှိ
ပြီ သူတို့ ရဲ့ ခရက်တစ်ကဒ် နှင့် သုံးစွဲခဲ့ကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကျမာရေးဝန်ကြီးအမေရိကန်
သို့ လာစဉ်ကလား လုပ်ငန်းရှင်တဦးဖြစ်သော ဒေါက်တာဖုန်းဝင်းကို ခေါ်လာခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။
First,this is very very important all have to set up "DEMOCRACY" asaROOF of COUNTRY.
Otherwise "what all you done" go into the pockets ofasmall group of Military Gangsters/their partners.
It does not go public so citizens will become more poor and poor.
In this way we can say that the "FIRE" (which NE WIN ,JUNTA ignited in 1962) is still continued burning the country.
No body can not do the right things WHICH CAN STOP THIS FIRE.
မိုးကျော်သောင်း ကတကယ့် ချီးထုပ် ကောင်၊ ဗိုလ်ချုပ် တွေ နဲ့ ပေါင်းပြီး မြန်မာပြည် ကိုဖင်ချတယ့်ကောင်အကြီးစားပေါ့။ စောက်ကျင့်လုံးဝ မကောင်းပါ။
21 May 2012 at 05:04
မိုးကျော်သောင်း မိသားစုဟာ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် အစိုးရကို လဒ်ပေးပြီး ကိုယ်ကျိုးစီးပွားရှာ ခဲ့တာ ဟာသူ့အဖေ ဦးကျော်သောင်း လက်ထက်ကတဲကပါ၊ မိုးကျော်သောင်း ဟာ မဆလ ခေတ်မှာအောင်မြင်ခဲ့ပေမဲ့ နအဖ လက်ထက်မှာ လူကြီးတွေရဲ့ အထောက်အကူရမူနဲ ပါးခဲ့ပါတယ်၊ အကြောင်းကတော့ လူကြီးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အတွင်းရေးတွေကို နောက်ကွယ်ရာမှာ မိုးကျော်သောင်းက သွားပုတ်လေလွင့် ပြောဆိုခြင်းများ ကိုသိရှိသွားခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်၊ အဲဒီလိုနာမည် ပျက်ပြီးနောက်မှာ သူဟာ သူ့ရဲ့ စီးပွားရေးအား လုံးကို သူ့ရဲ့ သား Johnathan ကိုလွဲပြောင်းပေးပြီး နောက်ကွယ်ကနေ ကြိုးကိုင် လူပ်ရှားနေပါတယ်။
မိုးကျော်သောင်းဆိုသူသည် စကားကြီး စကားကျယ်ပြောပြီး ကတိဖျက်ဖို့ဝင်မလေးတဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တော်တော်များများလူကြီးများက သူ့ အကြောင်းသိနေကြပါပြီ။ သူသည် မိန်းမကိစ္စလည်းမလွတ်ကင်းပါ။ အခြားသော ၀န်ကြီးများလည်း အထူးသတိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
31 May 2012 at 07:52
မိုးကျော်သောင်းဆိုသူသည် စကားကြီးစကားကျယ်ပြောတက်သူ့ဖြစ်ပြီး ကတိလုံးဝမတည်သူပါ။ လူကြီးတော်တော်များများလည်း သူ့ အကြောင်းကို သိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းမကိစ္စလည်း မလွတ်ကင်းပါ။ ၀န်ကြီးများလည်း အထူးသတိထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
31 May 2012 at 07:58